I-Factory Tour-Chengdu Taiyu industrial Gases Co., Ltd.
Siyakwamukela efekthri yethu ye-Sulfur Hexafluoride eyakhiwe ngokuphelele ngo-2015. lo mzila wokukhiqiza uklanyelwe ikakhulukazi i-SF6, i-NF3 njengomkhiqizo wesiteji sokuqala.Umthamo wethu wokukhiqiza we-SF6 wonyaka ungamathani angama-2500-3500 enamabanga amabili.Eyodwa yibanga lemboni elingama-99.995% lesikhungo sikagesi.Enye i-99.999% ye-electronic grade ye-semiconductor.
Ngaphandle kwalokho, umthamo wethu wokukhiqiza we-NF3 ungafika ku-1500ton ngonyaka, futhi uthunyelwa ngokuqondile enkampanini enkulu yabasebenzisi abafana ne-Siemens, i-Toshiba emhlabeni.
Futhi Uma udinga amanye amakhemikhali eFluorides afana ne-CF4, WF6.AHF, Ungasithinta ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Uyemukelwa ekwakhiweni kwethu okuyinhloko okusebenzisanayo kwensimbi engenamthungo okuyifekthri enkulu yamasilinda e-china.Le nkampani ingahlinzeka ngazo zonke izinhlobo zesilinda esijwayelekile esiqinisekisiwe njenge-DOT3AA, ISO9809, TPED, KGS.
E-china, inkampani yegesi engu-90% ithenga isilinda kwaYongan.Ikakhulukazi ngesikhathi se-covid-19, inkampani ye-YA yenza imizamo emikhulu yokuhlinzeka ngesilinda esiphakathi komoyampilo emhlabeni wonke.
Ngaphezu kwalokho, kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isilinda somkhiqizo isicelo sakho sekhasimende, singahlangabezana nemibuzo yakho nganoma yisiphi isikhathi.
usayizi wesilinda kungaba 2 Litre, 4liter, 8liter, 10liter, 20liter, 40liter, 50liter, 100liter, 800liter, noma Iso Tank.
Siyakwamukela efekthri yethu yegesi ye-carbon monoxide.Inhloso yethu ukukhiqiza igesi ye-electronic grade carbon monoxide ubumsulwa bufika ku-99.9995%.
Ngakho-ke umoya wethu wokungcola ungu-≤0.02ppm, kanye ne-H2O≤0.1ppm.Kusukela ngo-2017, umthamo wokukhiqiza wephrojekthi yesiteji sokuqala ungu-280000Nm3/ngonyaka.
Ngo-Agasti ka-2018, umthamo wokukhiqiza wesigaba sesibili ukhula ufinyelele ku-2830000Nm3/ngonyaka, kanye no-9200000Nm3/ngonyaka kuze kube ngu-2019 Dec.
Manje sesingakwazi ukuhlinzeka ngokuhlanzeka kwe-carbon monoxide kusuka ku-99.5%, 99.9%, 99.99%, 99.999%, no-99.9995%.